Linux Mint inotaura nezve Cinnamon 5 kekutanga | Linux Vakapindwa muropa
Linux Mint inotitaurira kekutanga nezve Cinnamon 5, asi zvakare nezve Warpinator ye Android uye kuti vari muShells
In the Tsamba yemwedzi uno about Linux mint tinogona kuverenga Clement Lefebvre uyo ari kufara. Chimwe chinhu chaitika chakamuita kunyemwerera, uye izvo ndezvekuti mugadziri akaisa software yakagadzirwa neLinux mint timu kuGoogle Play, saka inogona zvakare kushandiswa paApple. Izvo zvavakaisa ndeyeWarpinator, iyo yakafanana neApple AirDrop asi yemakomputa anoshandisa Linux inoshanda system.
Kunaka kwe Warpector ndeyekuti, mune yayo yekutanga vhezheni, inoshanda ese ari pakombuta makomputa uye pane zvinofamba uye mapiritsi, asi izvo zvakagadzirwa nemugadziri uye isu tinokwanisa kurodha pasi kubva Iyi link Iyo vhezheni vhezheni yeGoogle's mobile operating system. Seizvo munyori anozviti iye slowscript anozvitsanangura, zviri nezve «chiteshi chisina kukodzera cheLinux Mint faira yekugovana chishandiso chezita rimwe chete. Iyo inowirirana zvizere neiyo yekutanga protocol uye inobvumidza iwe kuendesa nyore nyore mafaira pakati peApple neLinux zvishandiso".
Cinnamon 5 Yekutanga Ruzivo rweRamangwana Linux Mint
Zvamunotaura zvakare mwedzi uno ndezvekuti Linux Mint inowanikwawo mu Shells. Kutaura chokwadi, ndechimwe chinhu chingave chinonakidza, asi ndakanyadziswa mushure mekuziviswa kwaManjaro kuti izvo, pamwe nenyaya yekuti ini ndaive nezvimwe zvinhu zvekuita, zvakaita kuti zvikundikane kuburitsa chero chinhu nezve ino sevhisi. MaShells akafanana nemuchina chaiwo mukati megore watinogona kumhanyisa mashandiro senge Manjaro kubva kune internet browser, chero chishandiso chatinoshandisa. Zvino, Linux Mint iri zvakare muShell.
Kupedza katsamba, Lefebvre akataura izvozvo Hyptonix iri kugamuchirwa kwakanaka uye kutanga ruzivo paCinnamon 5:
Zvekushandisa maturusi ekutarisa uye nekushandisa zvinyorwa muCinnamon zvemhando ina dzezvinhu (zvinonhuwira): maapplet, madhesiki, ekuwedzera uye madingindira.
Cinnamon 5 ichauya neyekuraira turu yekushandisa inonzi sinamoni-spice-yekuvandudza iyo inozogona kuratidza zviripo zviripo uye wozvishandisa.
Iyo yekuvandudza maneja inotsigira "zvinonhuwira" inogadziridza.
Pakupedzisira, Lefebvre aida kuyeuchidza izvozvo Linux Mint 18 yasvika kumagumo ehupenyu hwayo kutenderera, saka anokurudzira kuvandudza uye ivo vanopa matatu ma link ekuti tidaro, kubva 18, 18.1 kana 18.2 kusvika 18.3, kubva pa18.3 kuenda ku19 y kubva pa19 kuenda ku19.3.
Zvandichaita kukusiya uye test kana Warpinator inoshanda paLineageOS iyo yandinayo paRaspberry Pi iyo yandinofunga ichauya inobatsira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linux Mint inotitaurira kekutanga nezve Cinnamon 5, asi zvakare nezve Warpinator ye Android uye kuti vari muShells
mint no akadaro
Iyo yemindi inoenda kubva pakuipa ichienda pakuipisisa, yavo distros inononoka uye inononoka, nekuti ivo vanoramba vachiitakudza nezvinhu zvisina basa, iwe unoisa mint uye iwe unoshandisa isingagumi kuburitsa zvisina basa zvinhu. Izvozvi xubuntu iri nani pane mindi, asi zana zvakapetwa zvirinani. Mint inofanirwa kufunga panzvimbo pekuisa zvinhu zvakawandisa, pane kupomhodza kugovera kana kutora vhezheni yakasimudzwa kwazvo, kune vanhu vasingade zvinhu zvakawanda zvisina basa kana kuti mukumisikidza iwe unowana menyu. nezvamunoda kuisa kana kwete.
@mintno, muchokwadi, iro ramangwana sarudzo ye: iso inobvumidza kumisikidza kushoma uye iyo 3 DE iri kuongororwa
Kusiyanisa FTP uye sFTP. Mafaira maviri ekugovana zviga